हेडक्वार्टरसमेत ‘गुमायो’ पूर्वमाओवादी केन्द्रले ! आफ्नै छाडेर भाडामा किन ?
२०७५ श्रावण २५ शुक्रबार १३:२९:००
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तीन महिना हुन लाग्यो तर, नेता–कार्यकर्ताको मन भने अझै एकीकृत हुन सकेको छैन । पूर्व माओवादीका नेता–कार्यकर्ता धुम्बाराहीस्थित पार्टी मुख्यालयमा बिरलै देखा पर्छन् भने पूर्व एमालेका नेता–कार्यकर्ता पेरिसडाँडा टेक्नै मान्दैनन् ।
बिहीबार बसेको पार्टी हेडक्वार्टर (सचिवालय) बैठकले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा रहने निर्णय गरेपछि पूर्वमाओवादी कार्यालयमा समेत ‘ठगिएको’ चर्चा हुन थालेको छ । नीति, नेतृत्वपछि पूर्वमाओवादीले मुख्यालयसमेत ‘गुमाएको’ टिप्पणी पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट हुन थालेको छ ।
यसअघि पेरिसडाँडा र धुम्बाराही दुवैलाई हेडक्वार्टरका रूपमा उपयोग गरिने ने क पाले बताएको थियो । धुम्बाराहीको कार्यालय भाडाको भएकाले पेरिसडाँडा हेडक्वार्टर बनाउन पूर्वमाओवादीका नेताहरुले जोडसमेत गरेका थिए ।
तर, पूर्व एमालेका नेता र स्वयम् अध्यक्षसमेतलाई धुम्बाराही नै ‘प्यारो’ लाग्न थालेपछि वैकल्पिक पार्टी कार्यालयको समेत खोजी भएको स्रोत बताउँछ ।
त्यसैले शुक्रबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा रहेको र दुई वर्षदेखि पूर्व एमालेले भाडामा उपभोग गर्दै आएको घर नै ने क पाको मुख्यालय रहने निर्णय गरेको छ । पेरिसडाँडास्थित पूर्वमाओवादी केन्द्रको नाममा रहेको घरमा ने क पाको जनसंगठनका कार्यालय तथा केन्द्रीय विभागहरु रहनेछन् ।
आफ्नै घर छाडेर किन भाडाको घरमा ?
एमालेले ०५४ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको बल्खुस्थित मुख्यालय ०७२ को भूकम्पले खण्डहर बनाइदियो । त्यसपछि एमालेले २३ साउन ०७२ देखि धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु शेर्पा स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा रहेको जग्गामा बनेको घर कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । एमालेले त्यो घर मासिक डेढ लाख भाडा भुक्तानी गर्नेगरी तीन वर्षका लागि लिएको थियो । समय गुज्रन एक वर्ष बाँकी छ । त्यतिञ्जेल मदननगर, बल्खुमा नयाँ भवन निर्माण गर्ने उसको तयारी थियो । तर, एकीकरण प्रक्रियासँगै बल्खुमा घर बनाउने योजना पनि मुल्तवीमा रहेको छ ।
एकीकरणपश्चात् पेरिसडाँडामा झन्डै दुई रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको घर पनि ने क पाकै सम्पत्ति बनेको छ । र, त्यहाँ मुख्यालय बनाउनु पर्ने आवाजसमेत उठेको थियो ।
“पेरिसडाँडाको तेत्रो संरचना अलपत्र पारेर किन धुम्बाराहीमा मुख्य कार्यालय राख्नु पर्यो ?” ने क पामा एक नेताले प्रश्न गरे । त्यस्तै उनले एकीकरणका नाममा नेतृत्वदेखि कार्यालयसम्म पूर्वएमाले हावी भएको भन्दै आश्चर्यसमेत प्रकट गरे ।
उनले मुख्यालयसमेत आफ्नो प्यारो लाग्ने हो भने पूर्वमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले एकीकरण प्रक्रिया कसरी आत्मसात गर्न सक्छन्, अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएकोसमेत बताए ।
यता ने क पाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल भने मुख्य बाटोमा भएको र पार्किङसमेतको सुविधा भएकाले हाललाई धुम्बाराहीलाई केन्द्रीय कार्यालय राखिएको र पेरिसडाँडालाई अलपत्र पार्ने नभई जनसंगठन र केन्द्रीय विभागका कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन् ।
पूर्वएमालेको मदननगर बल्खुको भूकम्पले ध्वस्त बनाएको संरचना हटाइसकेकाले बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको र यता पेरिसडाँडासमेत बेचेर नयाँ ठाउँमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
“दीर्घकालसम्म दुवै ठाउँ (धुम्बाराही र पेरिसडाँडा)मा मुख्यालय रहँदैनन्,” उनले भने ।